Vaovao - Fanangonana vokatra TPU biodegradable
Fitaovana an-dakozia vita amin'ny silika
Noho ny fanohanan'ny orinasa miaraka amin'ny tranokala famokarana maherin'ny 64000 metatra toradroa sy mpiasa maherin'ny 2500 miampy ny zavamaniry elektrôlika mandeha ho azy farany sy ny milina fandefasana loko miloko malefaka, dia mihoatra ny mpifaninana aminay ny kalitaon'ny avo indrindra, ny manam-pahaizana manokana, ny fahatsorana ary ny kalitaon'ny vokatra tsara indrindra izahay, indrindra ho an'ny be dia be takiana fotoana fohy na sarotra drafitra mila mpiasa za-draharaha. Natokana ho an'ny fifehezana kalitao henjana sy serivisy ho an'ny mpanjifa misaina, ny mpikambanay efa za-draharaha dia misy foana hiresaka momba ny zavatra takinao sy hahazoana antoka fa fahafaham-po ny mpanjifa.
Mety ho tsikaritrao fa mihamafana sy mihafana ny fahavaratra, ny hatsiaka ary ny hatsiaka rehefa ririnina. Manjary ilaina ny fiarovana ny tontolo iainana. Miaraka amin'ny olona amin'ny fangatahana fiarovana ny tontolo iainana avo sy avo kokoa, arak'izany, ny entana izay mety ho voajanahary dia fironana iray. Afa-tsy ireolanyard tia namana, mololo PLA voajanahary, mololo fisotroana taratasy, boaty fisakafoanana mololo varimbazaha, coaster hazo & keychainssns., Pretty Shiny Gift no mpamatsy mety manome ny vokatra TPU voajanahary ho an'ny mpanjifanay. Fanokanana ny ezaka voafetra ataontsika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ary hiaraka amin'ny tany tsaratsara kokoa.
TPU fitaovana dia fitaovana sariaka tontolo iainana izay mety ho simba. Izy io dia malefaka, mateza ary tsy mahazaka loto. Ity fitaovana biodegradable ity dia azo ampiasaina amin'ny vokatra isan-karazany toa ny marika fanjairana,andriamby frizidera, mari-pamantarana lehibe, tarehin-telefaona, wiper amin'ny efijery, firazanana an-tarobia, tagan'ny valizy, mpihazona karatra sns sns .Ankehitriny, azonao atao ny manamboatra ny sary famantarana anao manokana ho azy. Ny logo famoronana isan-karazany dia azo atao amin'ny TPU, toy ny fanontana silkscreen, fanontana offset, lenticular, glittering, glimmering, ranon-javatra manjelanjelatra sns. Ny vokatra TPU-Friendly TPU dia tonga lafatra amin'ny fampiroboroboana, dokam-barotra, fanangonana, fanomezana, fanomezana vahaolana amin'ny famantarana ny marika sns sns.
Herin'ny TPU: biodegradable, malefaka, mateza ary mahatohitra loto
Logo manokana: mamirapiratra, manjelanjelatra, fanontana lenticular, ranon-javatra manjelanjelatra, fanontana silkscreen, fanontana offset sns.
MOQ: 500pcs / famolavolana
Liana ary te-hamokatra vokatra TPU miaraka amin'ny logo anao manokana ho an'ny hetsika manaraka? Azafady mba omeo toro-hevitra fotsiny ilay entana avy amin'ny magazay an-tserasera na katalaogay be dia be, andefaso aminay ny sary famantarana na ny volavola miaraka amin'ny maodely sy ny fombanao nofidinao. Handefa fampahalalana momba ny vidiny sy sary porofo miorina amin'ny famoronana anao amin'ny alàlan'ny mailaka izahay. Vantany vao ekenao ny porofo ary apetrakao ny fandoavam-bola, dia ampanjarininay ny volavolanao manokana ary halefanay aminao.